FAHATONGAVAN’NY PAPA RAY MASINA: MATIHANINA NY FITANDROANA NY FILAMINANA
On sept 1, 2019 5 656
Andro vitsy sia no isana dia higadona eto Madagasikara ny lehib’ny fiangonana Katolika maneran-tana, na ny Ray Masina Fransoa izany. ao anatin’ny famerenana farany sy fametrapetrahana ny lamina rehetra ny komity mpikarakara sy ny eo anivon’ny fianakaviamb’ny Eveka.
Nisy androany Marina teny Soamandrakizay ny,* fihaonamben’ireo mpilatsaka an-tsitrapo mandary anjara amin’ny fandaminana, toy ny Antilin’ny Madagasikara.
Efa manomboka mizara ny fahazoan-dalana rehetra ho an’ny mpanao gazety hiandraikitra ny fampitam-bavo mikasika izany ihany koa ny eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblikasy ny eo anivon’ny episcopat izay ho an’ny mpanao gazety katolika na miasa amin’ny haino aman-jery katolika.
Eo anivon’ny fitandroana ny filaminana, efa mipetrapetraka ny lamina rehetra. misy ny paikady manokana novolavolain’ny mpitandro filaminana sy ireo mpiambina manokana ny Ray Masina na ny Garde Suisse avy any Vatican. ireto farany moa tsiahivina ihany no nanandrana sy niaraka namoaka ny fiara tsy laitram-bala hitondrana ny Ray Masina na ny Papa Mobile izany.
Ankoatra ny vata-miaramila izay nanaraka fiofanana manokana efa herinandro maro dia mihetsika avokoa ny fitaovana tahaka ny fiara, moto, ny helikoptera. ity farany izay hisahana manokana ny vonjy taitra na ny fitaterana ny olona mila vonjy maika. efa nisy rahateo, araka ny fanambaran’ny ministeran’ny Fiarovana sy ny avy amin’ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika ny fanazaran-tena na famerenana natao ny zoma lasa teo, teny amin’ny kianjaben’ny mahamasina. marihina fa tsy eo Mahamasina ihany no toerana hamaharan’ireo mpamonjy voina avy amin’ny mpitandro filaminana.
Raha tsiahivina, 30 taona lasa izay no nandray ny ray Masina Joany Paoly Faharoa i Madagasikara. ity farany izay efa nasandratra ho olo-masina ankehitriny.
Mpino manodidina ny 800000 hetsy, avy amin’ny lafy valon’ny Nosy no andrasana eto Antananarivo, amin’ny Sorona Masina lehibe ho tanterahina ny alahady 8 septambra ho avy izao eny Soamandrakizay.
AMBOVOMBE ANDROY: MITARAINA AMIN’NY SARA-PITSABOANA ALOA AMIN’NY HOPITALY NY MPONINA